Taona 2016 : tsy voavinavina ny fanarenana ny toekarena | NewsMada
Taona 2016 : tsy voavinavina ny fanarenana ny toekarena
Ao anatin’ny fisalasalana ! Hiverina tsikelikely ny fandrosoana ara-toekarena eran-tany amin’ity taona 2016 ity. Milaza anefa ireo mpahay toekarena fa tsy mbola hiharina araka ny tokony ho izy izany, toy ny talohan’ny taona 2007, fotoana nanombohan’ny krizy ara-bola. Miantraika aty amin’ny firenena andalam-pandrosoana izany satria mihena koa ny famatsiam-bola sy ny fampindramam-bola avy amin’ireo vondrona iraisam-pirenena, toy ny Banky iraisam-pirenena sy ny Tahirim-bola iraisam-pirenena, ohatra.
Eo amin’ny fiaraha-miasa samy firenena indray, anisan’ny tena mpividy akora fototra maneran-tany i Sina. Nihena koa ny fitomboana ara-toekarenany, ka nidina toraka izany koa ny fanafarany akora fototra avy any ivelany, ary anisan’izany ny harena an-kibon’ny tany.
Tsy nisy fampiroboroboana ny tsy miankina
Amin’izao fanontoloana izao, mitondra fampandrosoana haingana ny fampiasam-bola tsy miankina. Raha ny hita tato anatin’ny roa taona indrindra ity taona 2015 ity, tsy nivaingana ny fampiasam-bola tsy miankina eto an-toerana sy ny avy any ivelany.
Tsy nisy koa politika mazava nataon’ny fanjakana hanomezana sehatra sy nanohanana ny orinasa tsy miankina. Famoronana hetra vaovao, indray aza nataony toy ny Advanced cargo declaration (ACD), izay tsy mazava ny tena fampiharana azy.
Midika ireo fa tsy hita soritra mihitsy ny handrosoan’ny toekarena amin’ity taona 2016. Mandroso tarehimarika taham-pitomboana ara-toekarena 4,5% ny fanjakana raha 5% ny nokendrena tamin’ny taona 2015, nefa 3% no tratra. Fanao ihany ny manonona na manoratra tarehimarika fa miankina ny fanatanterahana azy koa anefa.